अनुवाद किन ? ~ जोगी जिन्दगी
3:46 PM मुसा मानुष 1 comment
मेरा असली मित्र छन् । एक साधु पत्रकार । उनले मलाई उर्दी गरी पठाएका प्रश्नका उत्तर हुन् यी । यो अन्तरवार्ता होइन ।
प्रश्नको उत्तर भरेसम्म पाम है । अनुवादबारे केही लेख्दैछु ।
यो अनुवाद किन गर्या हो ? केले प्रभावित गर्यो ?
मैले किशोरवयमा पढेका थोरै किताबमध्ये हो यो, त्यसैले आत्मैसँग बसेको थियो । पूँजीवादी समाजमा टुसाउने सपनाको अंकुरण त्यसको त्रासदिका छेकलमा बुनिएको मित्रताको कथा छ यसमा । कृषि मजदुरको कथा भएकोले पनि मलाई छोएको होला । बस्तुपरक कथावाचन शैली पनि गजबको छ ।
एक दिन पोखराको पढक्कु युवा समुह ह्वाट द बुक क्लबले यो किताबको बारेमा बोलिदिन निम्तो गरेपछि उपन्यास नै अनुवाद गर्ने हुटहुटी भयो । अमेरिकाका स्कुले विद्यार्थीका बिचमा अत्यधिक पढिने किताब हो यो । (तथापि अमेरिकाका धेरै विद्यालयमा अझै पनि प्रतिबन्धित छ यो किताब ) ।
अनुवाद किन चाहिन्छ ?
जापानका हारुकी मुराकामी हुन कि ब्राजिलका पाउलो कोहेलो, कोरियाका हाङ काङ हुन कि रसियाका तोल्सतोय मैले उनीहरूलाई पढेको अंग्रेजीमा हो । अनुवाद हुँदनथ्यो भने मैले छिमेका रविन्द्रनाथ ठाकुरलाई पनि नचिन्दो हुँ । गीता, महाभारत वा रामायण पनि नकुथ्दो हुँ ।
किनकी साहित्य लेख्न भाषा चाहिन्छ तर साहित्यको कुनै भाषा हुँदैन । अनुवाद जरुरी छ । सौन्दर्य त भाषातित हुन्छ नि । विचार भाषातित हुन्छ । कला भाषातित हुन्छ । भाषा त बरा थैली मात्रै हो । खजाना त थैली भित्र पो हुन्छ त ।
किनकी संसारमा अनेकन भाषा बोलिन्छन् र सबै भाषाको ज्ञाता हुन एक जुनी काफि हुँदैन, अनुवाद जरुरी छ ।
पहिलो अनुवाद हो या थुप्रै अनुवाद गरिसकिया छ ?
बिहान दैनिक ३ घण्टा नियमित लेख्ने बानी छ । तर आफ्नो सिर्जनात्मक लेखन नफुर्दाको बेला मन चोरेका रचनालाई अनुवाद गर्ने गर्छु । मैले प्रायः कविता र छोटा कथा मात्रै अनुवाद गर्थेँ । लामो रचना अनुवाद गरेको भने पहिलो पटक हो ।
राम्रा लेखकले अनुवादमा हात हाल्नुमा जोखिम छ कि प्लस प्वाइन्ट ?
दुबै छैन । यो एउटा सात्विक समाजसेवा (साहित्य सेवा) हो । पैसा पनि आउने समाजसेवा भन्दा अझ आनन्द होला ।
त्यसो त अनुवाद पनि यौटा सिर्जनात्मक अभ्यास हो । अनुवाद गर्दाका बखत थाह हुन्छ, कतिपय यस्ता शब्द र प्रसंग आउँछन् जसलाई अुनवाद गरिसाध्य नै हुँदैन । हरेक भाषामा आ–आफ्ना सवलता र सीमितता हुन्छन् । यस्ता प्रसंग आउँदा तपाईँले सबै कुरा बुझ्नुभएको हुन्छ तर त्यसलाई व्यक्त गर्न सक्नुहुन्न । आफूले बुझेर पनि अरुलाई बुझाउन नसकिने त्यो अनुभूति दिव्य हुन्छ, आध्यात्मिक पाराको हुन्छ । त्यसलाई छिचोल्दा मलाई निर्वाणै पाएजस्तो हुन्छ ।
अनुवाद गर्दा मलाई आफ्नो मातृ–भाषिक अल्पज्ञानको वोध हुन्छ । भाषिक सीमितताको त्यो अनुभूतिले म निक्कै खिन्न पनि हुन्छु । मलाई त्यो खिन्नता पनि मन पर्छ ।
अंग्रेजी भाषाबाट नेपालीमा आएका अनुवाद कस्ता छन् ? तिनको स्तर कस्तो छ ? ती कृतिमाथि कत्तिको न्याय भएको छ ? पाठक कत्तिको लाभान्वित हुने स्थिति छ ?
मैले अँग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएका धेरै किताब पढेको छैन । (अँग्रेजीमै पढ्ने हुनाले) । पढेका मध्येमा, अनुवादक अनुसारले कुनै निक्कै सुन्दर छन् कुनै काम चलाउ । कतिपय किताबमा गुगलले गरेकोजस्तो हास्यास्पद अनुवाद पनि भेटिन्छ । तै पनि त्यसलाई अन्यथा लिनु छैन । केही नहुनुभन्दा भएकै बेस होला नि ! पाठकले लाभान्वित भैदिदाँ हुन्छ ।
zackquaife March 3, 2022 at 6:27 PM
The casino near me - KLH
The Casino at the Casino at the Casino 대구광역 출장안마 at the Casino at the Casino at 김포 출장안마 the Casino at the Casino at the Casino 익산 출장마사지 at the 서귀포 출장마사지 Casino at the Casino at the Casino at the 천안 출장마사지